नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : "याद आउँछ दशैंको", एक पटक अबस्य हेरिदिनुहोला है !
"याद आउँछ दशैंको", एक पटक अबस्य हेरिदिनुहोला है !
तपाईं दर्शक श्रोताहरु नै मेरो साँगीतिक जिबनका भगवान र न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले मेरा गीत संगीत हेरिदिनुहुन्छ, सुनिदिनुहुन्छ र गाउन मन लाग्छ । परदेशमा बस्ने लाखौं लाख नेपालीहरुको पिँडा, घरदेशमा बस्ने आफन्तहरुको सम्झना र पिँडा, मेरो पिँडा, तपाईंको पिँडा, म र तपाईं जस्ता हामी सबै सबैको पिँडा गीतमा । बिगतमा जस्तै यहाँहरुको माया र साथको लागि बिनम्र आग्रह गर्दै मेरो यो च्यानल Subscribe गरिनुहुन पनि सादर अनुरोध । बिदेशको बसाई, घडीको सुई अनुसार चल्नु पर्ने जिबन, त्यस माथि कोरोनाको माहामारी । गीत, भिडियो भने जस्तो बनाउन सम्भब भएन यस पटक । बाँचिएछ भने अर्को बर्ष दिल खोलेर गाउने नै छु, बनाउनेनै छु । यस बर्षका लागि जे जस्तो भयो कृपया स्वीकारीदिनुहोला । छोरी सुस्माको सहयोगमा बनाइएको भिडियोमा भएका कमी कमजोरी प्रति पहिलेनै क्षमा याचना गर्दछु । धन्यवाद । तपाईं हामी सबैको जय होस । रुन छोड भो कोइली चरी डाली बसी तैंले तैंले मात्र रोइस भने के गर्ने हो मैंले ? याद आउँछ ए आमा ठूलो चाड दशैंको याद आउँछ ए बाबा गाउँ जाने बसैको ! बाँकी गीत मै सुनिदिनुहोला, हेरिदिनुहोला । तपाईंका लाइक, कम्मेन्ट, हाम्रा लागि आशिर्बाद हुन ।